Apple inotangisa iOS 11.2.5 pasina trace yemaneja webhatiri | IPhone nhau
Iyo gakava rebhatiri, kudzikisira uye yakaderera nzira yekushandisa iyo Apple inomisira kune vazhinji vashandisi yaifanirwa kuve nemazuva ayo akaverengwa. Zvizhinji nekuti isu takanga tichitarisa kumusoro iOS 11.2.5, vhezheni ine mashoma anoshanda padanho rekushanda, asi iyo inofanirwa kunge iri kugadzirisa matambudziko akakwenenzverwa neIOS kwenguva yakareba.
Hapana chinhu chinobva pane chaicho, Apple ichangoburitsa iOS 11.2.5 uye isu hatina chiratidzo chevatsva manejimendi manejimendi kugona kwavakafunga. Kune rimwe divi, kana ivo vakaona zvakakodzera kuisa diki ongororo nezve iyo HomePod, padyo padyo nekutanga kwayo.
Sezvo iwe uchigona kuverenga mumusoro:
iOS 11.2.5 inosanganisira rutsigiro rwePambaPod uye inosvitsa kugona kwaSiri kuverenga nhau (Australia, United States, uye United Kingdom chete). Ichi chigadziriso chinosanganisira zvakare kugadzirisa bug uye kugadzirisa.
Muchidimbu, vanopedzisira vatizivisa chigadzirwa chatisingazokwanise kutenga kuSpain, kugona kwatisingazokwanise kunakirwa kuSpain. (kana mune dzimwe nyika zhinji dzinotaura chiSpanish) uye zvimwe zvinofungidzirwa kuvandudzwa uye kugadzirisa zvipuka, izvo zvichitarisa zviitiko zvazvino, imwe inodedera.
Zvisinei hazvo update iyi haina kuuya yega, haikwanise kupotsa vhezheni yayo yeWOSOS 4.2.2 iyo inosanganisira kuvandudza uye kugadzirisa bug, yakabatana neshanduro 11.2.5 yeTVOS (mumutsetse mumwe chete) uyezve macOS High Sierra inouya kune imwe vhezheni ine gadziriso dzakakurumbira dzeIntel processor kushaya simba kunonzi Specter uye Meltdown (kunyangwe ivo vachifungidzirwa kuti vakagadziriswa kare)
Muchidimbu, isu tine zvishoma zvatingataure nezve ino nyowani yekuvandudza asi isu tiri kutomboyedza kuitira kuti tingawana chimwe chinhu icho Apple chakateedzera mumanyorero ayo mapfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple inoburitsa iOS 11.2.5 isina bhatiri maneja trace
Ndatenda zvikuru neruzivo. Ndinovimba kuti pavanosanganisa bhatiri sarudzo iwe unozotaura nezvazvo, nekuti ndepaya pandakatora nhanho yekuvandudza iphone yangu.
EDISON ECHAVARRIA akadaro
PASHURE pekuvandudza, Nhare YANGU YEMAHARA YAKARASIKA ZVINOTEVERA ZVINOTEVERA:
1. Haibvumiri kushandisa gudzanzwi kufona.
2. Mabhatani ekuwedzera kana kudzikisa vhoriyamu haashande.
3. Haibvumidze kuteerera kuIzwi memos.
Pindura kuna EDISON ECHAVARRIA
Ini ndapedza kumutsiridza (yeiyo iPhone) uye ikozvino ini ndinowana kuibatanidza kune iTunes ... enda chestnut! Yenguva yekudzorera zvachose uye kurodha pasi 2,75 GB kubva kudhorobha rangu ne6mb kurodha pasi. Zvese zvaive zvakanaka, zvakagadzirira kudzoreredza uye kubhoti 11.2.5 uye kamwe kamwe support.apple.com/iphone/restore
Pane mumwe munhu akafanana zvakaitika here?
Ndine 7 plus 256gb
Usataure blowjob uye tsvaga zvimwe zvishoma. iOS 11.2.5 yakanga yatogadzirwa gakava rebhatiri risati razivikanwa. Izvo Apple yakavimbisa nemabhatiri, inouya neIOS 11.3 iyo yave kuwanikwa kune vanogadzira.
Uri kuita sei neichi chigadziriso? ndeyekuti ini ndine Iphone 5S uye ini handizive kuti ndovandudza vhezheni 11.2.5. Chii chaunokurudzira?
Neyekuvandudza, bhatiri rinozvinyungudika mukati maawa matanhatu chete pasina kushandisa chishandiso. Inouraya. Ini ndinobvisa sei iyi yekuvandudza?
Livan Muchena Milian akadaro
Ndine iphone 6 ine ios 11.1.1 iyo neiyo sisitimu yekushandisa iyo mutoro unoenda nekukurumidza, kana ndikaivandudza, dambudziko richagadziriswa here?
Pindura kuna Livan Blanco Milian
Ndine iPhone 6 uye pandinoigadziridza inotangazve ichienderera uye kubhadharisa bhatiri zvinotora hafu yezuva kana kupfuura uye kuiisa pakaderera kushandiswa. Ini handikurudzire zvachose kuvandudza zvishandiso.
Mutengo wekuchengetedza HomePod neAppleCare + i $ 39